SB251 Ruqsadaha Darawalnimada: Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > SB251 Ruqsadaha Darawalnimada: Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo
SB251 Ruqsadaha Darawalnimada: Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo
Waa maxay SB251?
SB251 waa sharci la ansixiyay 2013 si looga dhigo liisamada darawalnimada Colorado inay u wada helaan qof walba iyadoon loo eegin xaaladooda socdaal. Bulshooyinka muhaajiriinta ah iyo xulafadooda waxay dagaallameen 10 sano si tan looga dhabeeyo.
Liisankaygu sidee u ekaan doonaa?
Shatiga SB251 wuxuu leeyahay calaamado madow iyo luqad, "Uma ansaxna ujeedooyinka aqoonsiga federaalka, codbixinta, ama ujeedooyinka faa'iidooyinka dadweynaha" ee xagga hore waxay kaga duwan tahay ruqsadda Aqoonsiga-Aqoonsiga Real-ID.
Qof kasta oo wata dukumiintiyada loo baahan yahay wuxuu xaq u leeyahay inuu helo rukhsad cusub. Shuruudaha ayaa ka duwan dadka leh joogitaanka ku meelgaarka ah ee sharciga ah iyo dadka aan haysan sharci socdaal sharci. Si aad u aragto liiska dukumiintiyada loo baahan yahay, guji halkan.
Waad u adeegsan kartaa liisankaaga SB-251 wadista baabuurta iyo inaad isku sheegtid saraakiisha booliska. Laga bilaabo Oktoobar 2020, ma awoodi doontid inaad isticmaasho shatigaaga SB-252 si aad u raacdo diyaarad. Kuuma saareyso inaad xaq u yeelato waxtarro guud oo aadan xaq u lahayn ka hor intaadan helin liisanka darawalnimada, kumana oggolaanayo inaad shaqeyso ama xaq laguuma siiyo inaad wax doorato.
Waxaan dib ugusoo cusbooneysiiyay khadka tooska ah mana aanan helin liisanka darawalnimada / ogolaanshaha tilmaanta / ID.
Maskaxda ku hay in ay wakhti ku qaadaneyso farsamayaqaanada shatiga darawalnimada ah inuu ku xaqiijiyo dukumiintiyada aad soo gudbisay.
Waxaad ka hubin kartaa heerka cusboonaysiintaada cinwaanka https://mydmv.colorado.gov/?Link=TrackLicense.
Haddii ay ka badnayd 30 maalmood tan iyo markii aad cusbooneysiisay oo xiriiriyahan uusan ku qorneyn in liisankaagii lagu soo celiyey xafiiska liisanka darawalnimada, fadlan wac 303-205-2335 si aad u samaysato ballan si aad u booqato xafiiska liisanka darawalnimada oo aad u hesho nuqul bilaash ah. Waxaa lagaa doonayaa inaad cusboonaysiiso markale haddii ay ka badnayd 60 maalmood tan iyo markii cusboonaysiintaada oo aadan helin kaarkaaga / laguma celin xafiiska shatiga darawalnimada. Haddii aad doorato inaadan cusboonaysiin khadka tooska ah, ballan ayaa loo baahan yahay.
Waxaad ka dalban kartaa cusboonaysiin khadka tooska ah si aad u beddesho kaarkaaga lumay ama lagaa xaday. Waxaa lagaa qaadayaa khidmadda cusboonaysiinta caadiga ah.
Haa. Shakhsiyaadka codsanaya markii ugu horreysay ama cusbooneysiinta xafiis ayaa looga baahan yahay inay ballan qabsadaan. Ballanta waxaa laga sameyn karaa Colorado.gov/dmv ama waca 303-205-2335. Ballamada cusbooneysiinta Xafiiska Shatiga Aurora Darawal waxaa lagu heli karaa oo keliya taleefan.
Maya. Waxaad isticmaali kartaa isla nooca ballanta CO-RCSA SB251. Waxaad heli kartaa oo keliya liisanka darawalnimada / oggolaanshaha tilmaanta / Aqoonsiga adoo adeegsanaya lambarka Sooshiyaal Sikiyuur ilaa 1-da Janaayo, 2019.
Dukumiintiyada la aqbali karo si loo bixiyo caddeynta lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti waa:
Kaarka Lambarka Bulshada ee Lambarka Bulshada (oo aan la dirin)
Foomka W-2 (si elektaroonig ah looma aqbalo)
Foom aan ahayn SSA-1099
Bixi jeeg ay ku qoran yihiin magaca codsadaha iyo SSN dusha ku yaal
Dukumiintiyada loo isticmaalay caddeynta lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti waa in lagu bixiyaa nuqul adag, oo aan elektaroonig ahaan lagu soo darin.
Si aad u aragto liiska xafiisyada bixiya shatiyada SB251, riix halkan.
Liisanka darawalnimada - $ 33
Oggolaanshaha waxbaridda - $ 21
Kaarka Aqoonsiga - $ 13
Maxaan sameeyaa haddii aan haysto dhowr tikidh taraafikada oo aanan awoodin inaan iska bixiyo?
Fadlan daryeelo iyaga kahor intaadan dalban shatiga SB-251. La hadal qareen haddii aad wax walwal ah ka qabto. Haddii aad reer Mexico tahay, la xiriir Qunsuliyadda Mexico si ay kaaga caawiso nadiifinta tigidhada taraafikada.
XAGEE KA HELI KARAA MACLUUMAAD DHEERAAD AH?
Fadlan booqo Bogga Colorado DMV Wixii macluumaad dheeraad ah.
MA KU LEEDAHAY ARRIMO LAGU SOO CELINAYO AMA LAGU HELAY LIISKAAGA?